Uyenza njani i-Testosterone Cypionate egqityiweyo kwiPowder Steroid Powers
/Blog/Testosterone cypionate/Uyenza njani i-Testosterone Cypionate egqityiweyo kwiPowder Steroid Powers
ezaposwa ngomhla 09 / 22 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo Testosterone cypionate.
Kwindawo yokwakha umzimba, kukho i-steroid ethengisa eshushu-Testosterone Cypionate powder, Esinceda ukwakha imisipha kunye nokuqinisa amathambo, isetyenziselwa ukulahlekelwa kweoli kunye ukuphucula ngokwesiniAbantu bahlala bethenga iimveliso zeTesttosterone Cypionate kwiivenkile ezikwi-Intanethi uthenge i-steroids powder eluhlaza ngenxa yexabiso layo eliphantsi kwaye hayi iindlela ezinzima zokuvelisa.Namhlanje silapha ukuze sabelane ngendlela engcono yokwenza iTesttosterone Cypionate powder.
Sithatha i-Testosterone Cypionate powder 100 mg / mL umzekelo.
Isisombululo ngasinye se-mL se-100 mg / mL siqulathe:
I-Testosterone Cypionate powder ……………………………………………………………………………. 100 mg
I-Benzyl benzoate ………………………………………………………………………………………… i-0.1 mL
I-oyile yomdongwe …………………………………………………………………………………………… 736 mg
I-benzyl alcohol (njengesiyibulali) ………………………………………………………………
Isalathisi (naluphi na ubungakanani)
I-Vial Vial Vial (nayiphi na ubukhulu)
Isihlungi seSringile Sterile 22um
Izikali zeDijali ezilingana no-0.01g
Okokuqala-Linganisa i-Testosterone Cypionate kwi-glass beaker njengoko kubonisiwe ngasentla, yongeza i-Benzyl Alcohol kunye ne-Benzyl Benzoate.
Okwesibini -Iinyibilikisi ziya kuqala kwangoko ukunyibilikisa umgubo kodwa ukwenzela ukukhawulezisa inkqubo kunokwenzeka ukuba usebenzise ibhafu yamanzi.
I-intlanzi i-vial ibe ngamancinzana ambalwa emanzini epanini okanye into efanayo: kubalulekile ukuba ungasebenzisi amanzi ashushu kakhulu kuba oku kuya kubangela ukuba ezinye iimveliso zenze i-150f ibushushu obuhle bokuyisebenzisa, ngaphandle kwamanzi abilisiwe kwi-kettle . Ioli ephathekayo kufuneka ibe liqondo elifanayo kunye nesisombululo xa sithengiswa ngoko ukuba ufudumala isisombululo kwindawo yokuhlambela amanzi kufuneka ufanane neoli.
Isikhokelo esipheleleyo kwiNandrolone Ester (DECA Durabolin)
Injongo kweli nqanaba liphela ukuphelisa ngokupheleleyo i powder kwiingxube. Akufuneki kubekho "iHormone swirls" okanye nayiphi na ipowusi ebonakalayo esele kwisisombululo kwaye xa oku kuphunyeziweyo kuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
Emva koko – Yongeza ioyile efudumeleyo yeCottonseed kwisisombululo
Kule meko i-736ml kufuneka ifakwe. Hlanganisa kwakhona kwakhona, akufuneki kubekho i-hormone e-swirls-xa oko kwenzeka kwenzeka kususwe ngokukhawuleza kumanzi okuhlambela amanzi kwaye uqhubekele kwinkqubo yokucoca.
Ngasentla: I-powder steroid ichithwe ngokupheleleyo kwi-solvents, i-oyile yenkampani yongezwa kwaye imveliso ilungele ukucoca.
Okulandelayo – Yenza izisombululo kwisirinji oza kucoca ngayo
le nto ingaba yipiriti enye okanye le nto inokuphinda iphindwe kabini ngesirinji encinci. Susa isihlungi se-synde ye-0.22um oyinyumba ekupakeni kwayo kwaye ulungise inaliti eluhlaza kwinqanaba elincinci uze usebenzise kwisirinji.
Sula umphezulu wesibhakabhaka esinyumba kunye ne-Alcohol swab uze ufake inaliti eluhlaza kuyo, faka inaliti ifakwe kwisihlungi sesirinji kwisibilini njengoko kuboniswe ngezantsi:
amaNqaku: Inaliti yesibini ilinganisa uxinzelelo njengoko isisombululo singena kwi-vial. Faka uxinzelelo kwi-syringe plunger kwisihlungi umxube. Le yinxalenye ebaluleke kakhulu yale nkqubo yonke njengoko yinto eyenza umkhiqizo wakho ubonakalise. Zonke ii-steroids ezigqityiweyo ukusuka kwileyiphi lebhu ye-steroid kufuneka ihambe kule nkqubo.
Ngamanye amaxesha umntu unokufumanisa ukuba uluhlu lwefayile luyekile okanye ukuba inkqubo iyancipha kakhulu-iyamkeleka ukubuyisela isihlunu kunye ntsha xa kwenzeka ukuba ulondoloze ixesha. Ixesha elithathayo ukucofa i-steroids lixhomekeke kwixeshah steroid powder ihlonywa kwaye zininzi kangakanani i-filtere, kunye neg mg / ml yemveliso.
ekugqibeleni--Ngaphandle kokuba umkhiqizo ucocelwe kwintsimbi engummiselo inkqubo iphelele.Uze uqale ukusebenzisa.
Ngaba kulula kakhulu? Ukusetyenziswa okulula ngexabiso elinokhuphiswano oluninzi.